ONN LIVE : Oduu Olmaa Oromiyaa – Bitootessa 8, 2019 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooONN LIVE : Oduu Olmaa Oromiyaa – Bitootessa 8, 2019
ONN: Oduu Olmaa Oromiyaa, Hagayya 24, 2018 Hiriira deggeersa ABO/WBO dhaaf Ona Jiddaa Ayyaanaa tti…
ONN: Oduu Idilee Olmaa Oromiyaa, Adooleesa 24, 2018 Dr. Nagasoo Gidaadaa, pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii, waltajjii…
ONN/Istiidiyoo Kaayeeroo irraa: Oduu Olmaa Oromiyaa.Hagayya 21/2018 Beeksisa ============================== Beeksisa Kanneen ABO gargaaruu barbaaddan hundaaf:…
1.	Qabessso ottoo hin xumuriin wan wadaa galeemeef qofaa, dhabuun hinbarebaachissu. Wada abbaa fedhee irraa fudhachuun hin barebachissu.
2.	Warii kunn, kane issannii biraa darebaanii qabenyaa Oromo iraatii,laga che’aanii abbaa ta’uu dhaf gafaa yalaan, Oromon abbumaa gafaachuun issaa dirqmaa qabessoo ta’uu fi cimessuu ta’aa jechu dha,
3.	Qerrroon bassasseetumaa cimmessee baraachuu, dubissuu yoo goddhee garii fakkaataa, kanas hojaa irraatii oleechuun barebaachissaa fakkaataa.
4.	Jijiiraamaa barebaachissuu hojaa irraa oleechuun barebaachisaa dha, fakeenyaaf: OPDO or ODP mirgaa ummaataa oromoo wadaa galuu malee fixaa basuu hindandenyee, kanaf jijirammaa barebaachissu godhudhaf: Aanaa hundaa irraatii filaanoo godhudhan qerroon fi ummaanii Oromo buluchinssaa umaaataan fillamee bakkaa bussuun, hojaa hatatamaa akaa ta’uu ni mulataa. Kunnii immoo zonnii irraatii, itti fufinisaan hojaataamuu qaba, hatataamaan fixuun barebaachisaa dha. Alaagaan Finefinee kessatii iffaan off ijaaraachaa jiraa, male Kan Oromo yoo ta’uu dabaa ta’aa kanaf hojjaa kana ummaanii fi qeroon hatataman fixuu qabuu.
5.	Gafaa umaanii Oromo wan qabuu dhabuu homaa ittii hinfakkaatu, gafaa kondominiumiin rabessaamuu moremamu mirgaatuu dhibaamaa, kana Oromo mirgaa mittii, kunnii hatataamaan akkaa dhabaatuuf buluchinssaa barebaachissuu ummanii Oromo bakkaa kawaachuu qabaa, hatataaamaan.
6.	Affaann Oromo Affaan Federalla hataataaman ta’uu qabaa
7.	Oromon Walloo, Rayaan, Gojjam fi kkf Oromiyaatii akkaa makkamaan hatatttaman akkaa hojaataamu godhaamuu qabaa.
8.	Bulichinsii Finfinee Afaan Oromo hataataaman Affaan hojaa akkaa godhu ta’uu qabaa, Oromon assumaa Finfinee jalaa ta’ee lafaa issaa irratii namiiin dhufee, saniinu bakkaa faggoo irraa, Oromo irraatii murtessuu gafaa barebaddu…. Umaanii Oromo miregaa issaa dhunfachuu qabaachuun dabaa motii, kanaf bulechinissii Finefinee Affaan Oromo Affaan hojjaa akkaa ta’uu hataataaman hojjaa irraa olluu qaba.
9.	Dhumaa irraatii Qerrooon kumaa Shan Kan waregaamee Oromiyaa hundaa irra: Oromia kabaa, Oromia Dhihaa, Oromia Gidugalessa, Oromia Kiba fi Bahaa irraa yoo ta’uu, qabessoon Kan katee wan Finfinee ta’ee qofaaf ottoo hin tanee wan kufaamettee yeroon lakkii jedhaan wan gessef, ama ta’ee. Kanaf Tokkumaa Oromo diggudaaf yerroo nu akkas tanuu namiin nuf hin biremanee jedhaan ololaa offaan akkaa dhabattan godhuun barebachissaasdhaa.
10.	Qabessoo wadaadhan qabanessuun hin danda’aamuu, qabessoon xumuramuu qabedii. Kana bodaa kana Sanaa jechuun hin barebachisuu, Oromon yeroo dhumaatiif bulchinsaa issaff maluu dhabaachuu qabaa.